नेपाली कामदारले अब कोरियामै आफन्त भेट्न पाउने ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाली कामदारले अब कोरियामै आफन्त भेट्न पाउने !
काठमाडौं, साउन २१ । इपीएस प्रणालीबाट गएका नेपाली कामदारलाई करार अवधिमा कम्तिमा एकपटक आफ्नो परिवारलाई कोरिया लैजान दिने व्यवस्था गर्न दक्षिण कोरिया सहमत भएको छ ।
सोमबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले र कोरियाली राजदूत पार्क योंगसिकबीच मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राजदूत पार्कले सो व्यवस्था लागु गर्न तयारी भइसकेको जानकारी दिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री विष्टले यसअघि राजदूतलाई कारर अवधिभित्र कोरियामै आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्ने अवसर मिलाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए । राजदूत पार्कले कामदारको आफन्तलाई कोरियामा भेटघाट गर्न जाने अवसर मिलाइ सकिएको र केहि कामदारका आफन्तहरुले भेटघाट गरेर आईसकेको बताएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
तर केहि कामदारका आफन्तहरुले कोरिया पुगेर आफन्त भेटर आइसकेको बताइए पनि यस्को औपचारिक घोषाणा कोरियाले अहिलेसम्म गरेको छैन । केही समयभित्रै यस्तो सुविधाको घोषणा गर्ने बताइएको छ ।
लगातार कडा परिश्रम गर्नु पर्ने भएकाले कोरिया पुगेका धेरै कामदारमा डिप्रेशन जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । करीब पाँच वर्षसम्म घरपरिवार भन्दा टाढा बस्नु पर्दा धेरै नेपालीमा मानसिक समस्या देखिएपछि मन्त्री विष्टले यस्तो व्यवस्था गर्न राजदूत मार्फत त्यहाँको सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।